Ukusuka kwiiLedes ezityebileyo ukuya kwiZithako ezibalulekileyo ezifunekayo kuyo nayiphi na into
Ukubhalwa kweendaba kukuhle, kodwa kulabo abathanda amagama kunye nemisebenzi yokubhala, akukho nto ifana nokuvelisa ibali elibalulekileyo. Apha siza kugubungela yonke into ofuna ukuyifumana ngokuvelisa izinto ezintle. Uza kubona indlela yokwenza isicatshulwa esiyingozi , ukufumana izithako eziphambili kwanoma yimuphi umgangatho omhle, kwaye ufunde ngeentlobo ezahlukeneyo zamabali.
Ziziphi iindaba eziPhambili?
Buza abantu abaninzi ukuba yintoni ibali elithile, kwaye baya kuthetha into ethe tye kwaye ikhukhumele, ibhalelwe ubugcisa okanye icandelo lefashini yephephandaba okanye iwebhusayithi. Kodwa enyanisweni, iimpawu zinokuthi malunga nayiphi na isifundo, ukusuka kwindlela yokuphila ehamba phambili kuneyona ngxelo ephangaleleyo yophando. Kwaye iimpawu azifumaneki nje kumaphepha aphelileyo kwiphepha, ezo zijolise kwizinto ezifana nokuhlobisa ikhaya kunye nokuhlaziywa komculo. Enyanisweni, iimpawu zitholakala kuwo onke amacandelo ephepha, ukusuka kwiindaba ukuya kwishishini ukuya kwimidlalo. Amabali amacandelo awachazwa kakhulu ngongoma njengoko kubhalwe ngesitayela ebhaliweyo. Ngamanye amazwi, nantoni na ebhaliweyo kwindlela ejoliswe kuyo-yinto ebalulekileyo.
Izithako eziNtlanu eziphambili zokupheka kwiNdaba eziThusayo
Iindaba ezinzima zeendaba ziqhelekileyo ukuhlanganiswa kwezinto. Ezinye zibhetele-zibhalwe kunabanye, kodwa zonke zikhona ukuze zizalise injongo elula-idlulise ulwazi. Amanqaku omxholo, ngakolunye uhlangothi, injongo yokwenza okungakumbi. Bathumela iinkcukacha, ewe, kodwa baxelela amabali ebomi babantu. Ukuze benze njalo, kufuneka bafake iinkalo zobhala abangekho kwiifali zeendaba , ezihlala zihambelana nokubhalwa kweengcamango, kubandakanywa inkcazo, ukusetyenziswa okukhulu kweengcaphuno, ii-anecdotes, kunye namaxesha athile ngolwazi oluvela kwimvelaphi. Kaninzi "
Ukubhala iLedes kwiNdaba zeendaba
Xa sicinga ngamaphephandaba, sithatha ukugxila kwiindaba ezilukhuni ezizalisa iphepha eliphambili. Kodwa ubuninzi bombhalo ofunyenwe nakweliphi iphephandaba lwenziwa kwindlela ejoliswe kuyo. Ukubhala i-ledes kwiibali zembali ngumsebenzi ohluke kakhulu kunokuba ubhale i-ledes-news ledes. Iil-news ledes zifuna ukufumana zonke iingongoma ezibalulekileyo zebali - ngubani, yintoni, phi, nini, nini, kwaye njani-kwisigwebo sokuqala. I-ledes yomsebenzi, ngamanye amaxesha kuthiwa ukulibaziseka kukhokelela, kuvela kancane. Bavumela umlobi ukuba athethe ibali ngendlela engokwemveli, elandayo. Injongo, okwenene, kukuthatha umfundi kwibali, ukuba enze ukuba bafune ukufunda ngaphezulu. Kaninzi "
Ziziphi iindidi ezahlukileyo zeendaba zeendaba?
Sivele sichaze ukuba zeziphi iziganeko zembali, zichazwe iinqununu zeempawu kwaye zixubusha ukuba ubhale njani umvuzo. Kodwa njengokuba kukho iintlobo ezahlukeneyo zamabali-endaba, kukho iintlobo ezininzi zeempawu. Ezinye zeentlobo eziphambili ziquka iiprofayili, iindaba eziphathekayo, ibali leendwendwe , indawo yendawo kunye nokuhlala kuyo. Kaninzi "
Iindaba Zeendaba: Into Omele Yisebenzise, ​​kwaye Yintoni Okufanele Uyiyeke
Siye sathetha malunga nezithako eziphambili okanye izakhi ezenza ibali. Abaqalayo abalobi beembalo bavame ukuzibuza ukuba ingaba isithako ngasinye sinokubandakanya. Kwiibhala zeendaba, impendulo ilula: Gcina ibali elifutshane, elimnandi kunye nelo nqanaba. Kodwa iimpawu zenzelwe ukuba zibe zide, ukujongana nezihloko zazo ngokubanzi kunye neenkcukacha. Ngoko ke ingakanani inkcazelo, inkcazo kunye nolwazi lwemvelaphi lukhulu kakhulu - okanye lukhulu kakhulu? Impendulo emfutshane kukuba into ethile inceda ukuxhasa okanye ukukhulisa ingcamango ibali lakho, lisebenzise. Ukuba ayifuni, yishiye.
Sebenzisa izenzi kunye neengcebiso ngokuhlakanipha
Abahleli abaninzi baya kukuxelela ukuba abalobi bokuqala kufuneka basebenzise izichazi ezimbalwa kunye nezenzi ezinamandla, ezinomdla. Nasi isizathu. Kukhona umgaqo omdala kwibhizinisi lokubhala-bonisa, ungaxeleli. Ingxaki ngezichazi kukuba ababonisi nantoni na. Ngamanye amazwi, awanqwenela ukuba akhuphe iimifanekiso ezibonakalayo kwiingqondo zabafundi, kwaye zithatha indawo ecebileyo yokubhala kakuhle, inkcazelo efanelekileyo. Abahleli bathanda ukusebenzisa izenzi ngenxa yokuba batyhila isenzo baze banike ibali indlela yokuhamba kunye nokukhawuleza. Kodwa ngokuphindaphindiweyo ababhali basebenzisa ukhathala, izenzi ezingasetyenziswa. Kaninzi "
Iingcebiso ezisixhenxe zokuvelisa iiprofayili ezinkulu
Iprofayili yobuntu yinqaku malunga nomntu, kwaye iiprofayili enye yezinto ezisetyenziswayo zokubhala. Ngokuqinisekileyo ufunde iinkcukacha kumaphephandaba, kumaphephancwadi okanye kwiwebhsayithi. Iiprofayili zinokwenziwa malunga nantoni na enomdla kunye neendaba eziphathekayo, nokuba ngaba dolophu wendawo okanye inkwenkwezi. Nazi izicwangciso ezisixhenxe zokuvelisa iiprofayili ezinkulu, ukuqala kokubaluleke kakhulu-ukwazi ukufunda sakho. Abaninzi ababhali beendaba bathi bacinga ukuvelisa iiprofayili ezithatyathwa ngokukhawuleza apho bachitha iiyure ezimbalwa kunye nesifundo baze baxoxe ibali. Oku akuyi kusebenza. Ukubona ngokwenene ukuba umntu ufana nani ufuna ukuba naye kunye nexesha elide ukwenzela ukuba bawagcine baze baveze zabo ngokwenene. Oku akuyi kwenzeka ngeyure okanye ezimbini. Kaninzi "
Ngoko Ufuna Ukuba Yi-Critic?
Ngoko ufuna ukugxeka? Ingaba umsebenzi oye wachitha uhlaziyo lweefilimu, umculo, iincwadi, ii-TV okanye iivenkile zibonakala zifana neNirvana kuwe? Emva koko ungumgxeka ozelwe. Kodwa ukubhala ukuhlaziywa okukhulu kukubugcisa bokwenene, obuninzi abaye bazama kodwa bambalwa abaye bafunda. Funda abagxeki abaziintloko kwaye uya kubona into abo bafana ngayo-iimbono ezinamandla. Kodwa i-newbies abangathembekanga kwimibono yabo bahlala babhala ukuphononongwa kwinqweno. Babhala izivakalisi ezinjenge-"I-kind of a delighted this" okanye "into efanelekileyo, nangona ingabonakali." Bayesaba ukuthatha indawo eqinekileyo ngenxa yokwesaba ukufumana umngeni. Kodwa akukho nto iyakhazamisayo kunokuba kuhlaziywa kwe-hemming-and-hawing. Ngoko ke unqume oko ucinga, kwaye ungesabi ukuthetha ngokungaqinisekanga. Kaninzi "
I-Theory yoBuchule boBuchule
Ukuphulukisa ngeMela kunye neZakhiwo zeGeode
Geology yeNtaba Everest
'Venus kwiHurs' Book Review